FBC - Hojjataan Kaampaanii Googil barreeffama “dubartoonni sababa saala isaaniif Googiliitti hin-makaman” jedhu barreesse hojii irraa geggeffame
Hojjataan Kaampaanii Googil barreeffama “dubartoonni sababa saala isaaniif Googiliitti hin-makaman” jedhu barreesse hojii irraa geggeffame
Finfinnee, Hagayya 03, 2009 (FBC) Kaampaanii Googil keessatti dubartoonni fi dhiironni carraa hojii wal-qixa kan hin-arganne dhiibbaan waan irratti taasifamuuf osoo hin-taane garaagarummaa saalaa uumamaan qabaniifi barreeffama jedhu kan baase hojjataan kaampaanichaa hojiirraa geggeffameera.
Barreeffamni wal-nama falmisiisu kun naamusa kaampaanichaa irra kan daddarbedha jedhaniiru Hoji-raawwachiisaan Olaanaa Googil Suundaar Piichaay.
Barreeffamni baay’onni tibbanaa wal-harkaa fuudhan kun dubartoonni kaampaanii Googil keessa hojjatan baa’inaan kan xiqqaatan garaagarummaa saalaa uumamaan jiruuni malee kaampaanichi dhiibbaa waan uumuuf miti jedha.
Hoji-raawwachiisaa Olaanaa Googil barreeffamni kun hojii irratti ilaalcha garaagaraummaa saalaa barame kan calaqqisiise waan ta’eef seera kaampaanichaa irra daddarbeera jedhaniiru.
Gochi hojjataan kun raawwate hojjattoota dubartii fi aadaa bakka hojii kan jeequ ta’uudha kan ibsan.
Googil bilisummaa dubbachuu hojjattoota isaa akka hin-dhiibne kan himan hoji-raawwachiisaan kun, gochi nama kanaa garuu kanarra kan qaari’edha jedhaniiru.
Googil eenyummaa hojjataa kanaa kan hin-ifoomsine yoo ta’u, Niyooirk Taayiums garuu Jams Daamoor akka jedhamu fi wayita ammaa hojiirraa geggeeffamuusaa gabaaseera.
Injinara Moosaajii ta’uunsaa kan himame Jams Daamoor barreeffama isaa mata duree “Googil Ayidiyoolojikaal Ekkoo Chaambar” jedhu kenneef kanaarratti “dubartootaa fi dhiironni garaagarummaa dhalootaan qabaniin gahumsa gara-garaa qabaatu; garaagarummaan isaanii kunis damee teeknoolojii, fi bulchiinsaan dhiirota qixa akka hin-hojjenne isaan godha” jedha.
Daamoor “dhiibbaa garaagarummaan saalaa uumu dubbachuus wal-qixxummaa saalaa fudhachuu dhiisuu waliin wal-qabsiisuu dhaabuu qabna” jedhaniiru.
Dubartoonni dhiirota caalaa sodaatoo waan ta’aniif hojii dhiphina olaanaa qabu hin-barbaadani” yaadi jedhu hojjattoota hedduu kaampaanichaa dheekkamsiiseera.
Hojjattuun kaampaanichaa tokkos nama kanaarratti tarkaanfiin yoo hin-fudhatamu ta’e hojii akka gadhiiftu fuula Tiwiitaraa ishee irratti barreessiteetti.
Faallaasaan Injinarri Moosaajii kun barreeffama kana baasee booda hojjattoota Googilii hedduu irraa “ callisuu ture cabsitee kan keessa keenyaa waan dubbatteef sigalateeffana’ ergaawwan jedhan i-meeliin akka isa qaqqaban Biluubarg gabaaseera.
Googil hojjataa isaa wayita miindessu wal-qixxummaa saalaatiif iddoo guddaa nan kenna jedhus akka kaampaanota teeknoolojii warra kaanii gama dubartoota miindessuun ammas niqeeqama.
Madda: BBC fi Niyoork Taayims
Oduuwwan Biroo « Yuu Tyuub tajaajila Yuu Tyuub Chaat ifoomse	Biritaaniyaan dhaabbilee ugguurraa saayibarii hin-ittisne hanga Paawundii miliyoona 17 akka adabdu beeksifte »